Wikipedia:Takelaka/Tahiry 2021 - Wikipedia
Ny fiteny malagasy dia tenim-pirenen'ny Repoblikan'i Madagasikara. Ny teny malagasy dia ao amin'ny fianankavian-tenin'ny teny barito (ao amin'ny teny aostronezianina). Any Banjarmasin, nosin'i Kalimantan (Indonezia) no foiben'ny fiteny barito. Ny teny akaikikaikin'ny teny malagasy ankehitriny dia ny fiteny maaniany. Misy koa ny fiteny samihima sy ny fiteny dosona deiaha sns. Ny fiteny malay izao no teny miasa eo amin'io nosy io. Araka ny antontanisan'ny Akademia malagasy dia ny 83,61% dia tsy miteny afatsy ny teny malagasy.
Ny endriky ny teny malagasy dia tsy tahaka ireo fiteny ao Afrika satria io fiteny io dia ao amin'ny vondrona malaiô-pôlineziana, sampan'ny vondrona aostrôneziana. Ny fiavian'ny teny malagasy dia fantatr'ireo mpandini-piteny hatry ny taonjato faha-19. Ny teny malagasy dia mitovy vondrom-piteny amin'ny fiteny baritô avy amin'ny faritany atsimo atsinanan'ny Nosy Bôrneô. Betsaka ny fitovizan'ny teny malagasy amin'ny fiteny ma'aniany, fiteny tenenina eo amin'ny faritry ny renirano Baritô, ao atsimon'i Bôrneô. Lazaina fa mponina aotrôneziana avy amin'ny tamba-nosy maley nandalo tany Bôrneô no nipetraka teto Madagasikara, na dia tsy fantatra aza ny anton'io fifindrana io. Taonjato maro taty aoriana, nifangaro tamin'ny Arabo sy ny Masombika (Afrikana avy amin'ny tontolo soahily) ny mponina aostrôneziana. (tohiny...)
Ny Repoblikan' i Kôngô na Kôngô-Brazzaville dia firenena ao amin'ny faritra afovoan'i Afrika. I Brazzaville no renivohiny. Mifanefi-tany amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô ao atsimo sy ao atsinanana, amin’ i Angôla ao atsimo andrefana, amin’ i Gabôna ao andrefana ary amin’ i Kamerona ao avaratra-andrefana izy. Manana morontsiraka mirefy 169 km amin’ ny Ranomasimbe Atlantika izy ary manana velaran-tany mirefy 342 000 km2. Isan' ireo firenena farany mahantra ny Repoblikan' i Kôngô.
Ny Pigmea Mboty no mponina voalohany tao amin' ny faritra misy ny Repoblikan'i Kôngô ankehitriny. Niorim-ponenana tao koa tamin’ ny fiandohan’ ny fanisan-taona iraisana ny Banto. Ireo fanjaka-mpanjaka roa lehibe dia ny fanjakan’ i Lôangô sy fanjakan’ i Kôngô. Ny fanjakan’ i Lôangô dia fanjakana miankina amin' ny fanjakan’ i Kôngô. Ny faharavan’ ny fanjaka-mpanjaka, ny fivarotana andevo, ny ady mitam-pidiana dia nanakorontana ny fiainan’ ny mponina. (tohiny...)
I Godefroy de Bouillon sy ireo mpitarika ny Kroazada voalohany
Ny kroazada voalohany dia fahafihana miaramila nataon' ny Kristiana tamin' ny taona 1095 hatramin' ny 1099, taorian' ny fandavan' ny Torka seljokida tamin' ny taona 1078 ny hamela malalaka ny fandalovan' ny Kristiana mpanao fivahiniana masina ho any Jerosalema. Tamin' ny fiafaran' izany kroazada izany dia azon' ny Kristiana i Jerosalema sady niforona ny Fanjakana kristianan' i Jerosalema.
Nanomboka tamin’ ny 27 Novambra 1095 ny kroazada, tamin’ ny toriteny nataon’ ny papa Orbano II teo anatrehan’ ny mpivory nandritra ny kônsily tao Clermont (Clermomont-Ferrand ankehitriny), izay nanainga ny mpandray anjara mba hamonjy ny Kristiana any Atsinanana sy hanafaka ireo tanàna sy toerana masina. Nisy nanoina izany antso izany ka maro ireo izay nanatevin-daharana ny mpiantafika, rehefa avy nosalorana ankanjo misy vokovoko (latina: crux).
Manan-talenta amin’ ny paik’ ady ny papa ka nanome indolzansa feno ireo izay nandray anjara tamin’ ny dia nankany Jerosalema sy nanapa-kevitra hiandry ny volana Aogositra 1096 vao izay hamela ny fandehanana isan’ andiany. Ny andiany tsirairay izay nianto-tena sy nanana ny mpitarika niankinany, dia nifidy ny lalan-kombany hatrany Kônstantinôpôly (na Kônstantinôpla) (Istanbul ankehitriny). Ao no niaingan’ ireo fanafihana namelezana ny Seljokida tao Anatôlia sy namelezana ny emperora bizantina, alohan’ ny hahafahana mankany Jerosalema. (tohiny...)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Takelaka/Tahiry_2021&oldid=979017"
Voaova farany tamin'ny 1 Janoary 2020 amin'ny 21:20 ity pejy ity.